Inguqulelo entsha yeDeaDBeeF 1.8.8 sele ikhutshiwe kwaye ezi ziindaba zayo | Ubunlog
Inguqulelo entsha yeDeaDBeeF 1.8.8 sele ikhutshiwe kwaye ezi ziindaba zayo
Ukuphehlelelwa ingxelo entsha yesidlali-mculo I-DeaDBeeF 1.8.8 Inguqulelo yesibhozo yokulungisa i-1.8.x yomdlali kwaye kule nguqulelo intsha utshintsho oluthile lubalulekile, njengokuqhubekeka kwemethadatha kwi-ID3v2 kunye neethegi ze-APE, kunye nokuphuculwa konxibelelwano, ukuphuculwa Uluhlu lwezongezo kunye nokunye.
Kulabo abangaqhelekanga nge-DeaDBeeF, kuya kufuneka uyazi ukuba le ngumdlali womculo onawo Ukubhalwa kwakhona ngokuzenzekelayo kokubhaliweyo kokubhaliweyo, Isilinganisi, inkxaso yeefayile ekubhekiswa kuzo, ukuxhomekeka okuncinci, ukukwazi ukulawula ngomgca wokuyalela okanye kwitreyi yenkqubo.
Ngokufanayo Iyakwazi ukulayisha kunye nokubonisa amaqweqwe, Umhleli wethegi eyakhelwe-ngaphakathi, amathuba aguqukayo wokubonisa iindawo ezifunekayo kuluhlu lweengoma, inkxaso yokusasazwa kwe-Intanethi kwirediyo, ukudlala kwakhona ngaphandle komthungo, ubukho be-plug-in yokuhambisa umxholo.
1 Iimpawu ezintsha eziphambili zeDeaDBeeF 1.8.8
2 Uyifaka njani i-DeadBeef 1.8.8?
Iimpawu ezintsha eziphambili zeDeaDBeeF 1.8.8
Kule nguqulo intsha yeDeaDBeeF 1.8.8 sinokuyifumana loo nto ukongeza iithebhu ezinoluhlu lokudlala, Olona tshintsho kugxilwe kulo luxhaswa kunye nokuhamba kwekhibhodi, ukuya kwiNgaphandle kokuphathwa kweendlela zefayile kwii-albhamu kuye kwaphuculwa kakhulu.
Singafumanisa ukuba isilumkiso malunga nendalo eyonakalisayo yokusebenza kucinyiwe kwincoko yababini yokusebenza neefayile kwaye xa usasaza ngePulseaudio, inkxaso yamanqanaba esampulu ngaphezulu kwe-192 KHz iyenziwa.
Olunye lotshintsho olubonakalayo kule nguqulo intsha yeDeaDBeeF 1.8.8 yi Ukulungiswa kwemethadatha entsha negama lealbhamu (umxholo ongezantsi wediski) Kwii-ID3v2 kunye nee-tag ze-APE.
Ngoku ngoku Uluhlu lweplagi ngoku luxhasa amacebo okucoca ulwelo kwaye lubonisa ulwazi malunga neefowuni, Seta iiplagi ngokulandelelana kwealfabhethi kunye nenkxaso nayo yongezwa ukuze ikwazi ukutshintsha umbala wezihloko. Umsebenzi we-$ rgb () wongezwe kwizixhobo zokufomatha iintloko.
Olunye utshintsho olwahlukileyo kolu hlobo lutsha:
Ukuphuculwa konxibelelwano ekuqwalaseleni iiplagi.
Ifestile engenamda eneseto yenziwe.
Ukongezwa kwesakhono sokufunda iithegi zeWAV RIFF.
Iwindow ephambili ibonelela ngesakhono sokuhambisa izinto kwimowudi yokutsala kunye nolahlo.
Isibonisi sokuma kwendawo ngoku ixhasa ukubuyela umva ngevili lempuku.
Iqhosha elithi "Dlala Okulandelayo" longezwe kwimenyu yokuma.
Ukulungiswa kweempazamo ezilungisiweyo xa usebenzisa iplagi yePSF kunye nokufunda ezinye iifayile kwifomathi ye-AAC.
Gqibela ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngayo, ungajonga iinkcukacha Kule khonkco ilandelayo.
Uyifaka njani i-DeadBeef 1.8.8?
Ukuba ufuna ukufaka esi sidlali-mculo kwiinkqubo zakho, kuya kufuneka ulandele imiyalelo esabelana ngayo apha ngezantsi. Okwangoku Umdlali ufumaneka kuphela ekusebenzeni kwayo, onokuzikhuphela kwikhonkco elingezantsi.
Nje ukuba ukhuphelo lwenziwe, kufuneka bavule iziphu kwiphakheji, abanokuyenza kwisiphelo sendlela. Ukwenza oku, kufuneka bavule enye (banokuyenza ngezitshixo ezinqumlayo Ctrl + Alt + T) kwaye kuyo baya kubeka indawo kwifolda apho bakhuphele iphakheji kwaye baya kuchwetheza lo myalelo ulandelayo:
Nje ukuba kwenziwe oku, ngoku kufuneka bangene kwifolda enesiphumo kwaye banokuvula umdlali ngefayile yakhe enokufezekiswa engaphakathi kwifolda ngokunika imvume yokuphumeza nge:
Ukucofa kabini kuyo okanye kwisiphelo esinye kunye:
Nangona kukho indawo yokugcina isicelo, engayi kuthatha ixesha elide ukuvuselela ingxelo entsha. Ukwenza ufakelo kufuneka songeze indawo yokugcina isicelo kwinkqubo yethu, esinokuyenza ngokuvula i-terminal nge-Ctrl + Alt + T kunye nokwenza le miyalelo ilandelayo kuyo.
Okokuqala songeza indawo yokugcina kunye:
Sinika ukungena ukwamkela, ngoku siza kuhlaziya uluhlu lwezinto zokugcina kunye nokusetyenziswa kunye:
Kwaye ekugqibeleni siyaqhubeka ukufaka umdlali ngalo myalelo ulandelayo:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » isiNxulumanisi » Inguqulelo entsha yeDeaDBeeF 1.8.8 sele ikhutshiwe kwaye ezi ziindaba zayo
I-CTparental, isixhobo solawulo sabazali esifumanekayo ku-Ubuntu
I-Linux 5.14-rc4 ikhutshiwe ilungisa ezinye ii -apps ze-Android kunye nenye into ekufanele ukuba uyikhankanye